Ku soo cesho fayl kasta oo ka socda Mac-gaaga oo leh Wizard Data Recovery EaseUS | Waxaan ka socdaa mac
Kabsado fayl kasta oo ka socda Mac-gaaga oo leh Wizard Data Recovery EaseUS
Luminta dukumiintiyada, sawirada, fiidiyowyada ama feylal kale oo muhiimad weyn noo leh waa walaac na wada keenaya oo dhan. Si taas looga fogaado, waa wax caadi ah in nuqullo nuqul ah laga sameeyo dirawalada adag ee dibadda ama adeegyada kaydinta daruuraha, hase yeeshe, illaa aan ka sameyno nuqulladaas, waxaan si kadis ah u waayi karnaa feylasha muhiimka ah. Xitaa nuquladaas way ku fashilmi karaan duruufaha qaarkood. Nasiib wanaagse, waxaan hadda si fudud u neefsan karnaa mahadsanid Qalabka Soocelinta Xogta EaseUS.
In kasta oo magaceedu dheer yahay, Qalabka Soocelinta Xogta EaseUS waa a software kabashada xogta u Mac aad ufudud oo aamin ah in la isticmaalo, taas oo naga caawin doonta inaan soo ceshano feylal aan si kadis ah u tirtirnay ama aanaan u heli karin sabab kastoo jirta. Aynu si faahfaahsan u aragno waxa qalabkan waxtar leh ka kooban yahay ee naga badbaadin kara wax ka badan hal dhibaato.
1 Waxba laguma lumiyo Wizard Data Recovery Wizard ee Mac
2 Faylal noocee ah ayaan ku soo ceshan karaa?
3 Deg deg ah, amaan ah oo sahlan in la isticmaalo dhowr guji oo keliya
4 Maxaa ku cusub nooca 11.8
Waxba laguma lumiyo Qalabka Soocelinta Xogta EaseUS loogu talagalay Mac
Waxtarka, con Wizard Data Recovery Data, ma jiraan wax faylal ah oo ku jira Mac-gaaga oo lumayXitaa haddii aadan arkin, xitaa haddii aadan heli karin, xitaa haddii aad ogtahay inaad u qaadatay qashinka dib loo warshadeeyo oo aad faaruqiso. Hadda si fudud ayaad u neefsan kartaa, illaa aad ka tirtirto albamkaaga kun jeer oo isku xigta qaabka ugu fiican "Qaabilada style".
Qalabka Soocelinta Xogta EaseUS es qalab kabashada xogta ugu fiican ee Mac, aamin ah, dhakhso leh oo si fudud loo isticmaali karo.
Faylal noocee ah ayaan ku soo ceshan karaa?
Barnaamijkan waxaad ku awoodi doontaa kabsado dhammaan noocyada faylasha inaad si kadis ah u tirtirtay, laga bilaabo darawalada aad qaabeysay ama aan si fudud loo geli karin ama lumiyay Mac-gaaga sababo la xiriira duruufo kala duwan sida cusbooneysiinta nidaamka, xiritaanka lama filaanka ah, kala-goynta lama filaanka ah ee keydinta bannaanka ee bartamaha qorista, qormooyin si lama filaan ah u yeeshay la waayey, goynta khaldan iyo dhajinta ficilada, faaruqinta qashinka, iyo inbadan.
Dhammaan xaaladahaani waa kuwa caadiga ah ee aan mar walba u maleyno "taasi aniga igu dhici mayso" laakiin runtu waxay tahay inaysan waligeed dhicin, illaa ay ka dhacdo, iyo xilliyadaas muhiimka ah, waa marka aan u baahanno inaan helno barnaamijka noo oggolaanaya ka soo ceshano fiidiyowgaas fasaxyadayada ah oo aanaan awoodi doonin inaan mar kale ku celino, ama qandaraaskaas muhiimka ah ee aan kaydsannay.
Laakiin marka lagu daro, ma awoodi doontid oo keliya inaad ka soo kabsato feylashaada wadista adag ee Mac-ga, laakiin sidoo kale Waxa kale oo aad ku soo ceshan kartaa faylal lumay HDD ama SDD disk dibedda ah, pendrive, oo ah qalabka wax lagu duubo ee 'multimedia player', SD, CF, XD ama MMC kaadhka xusuusta, kamarad yar yar, iwm..
Ku saabsan nooca faylasha, EaseUS ee Mac es la jaan qaada in ka badan 200 oo qaabab fayl ah si aad u soo ceshan karto sawirro, fiidiyowyo, feylal maqal ah, dukumiintiyo ku jira PDF, Erey ama qaab kasta oo kale, buugaag dijitaal ah, emayllo iyo waxyaabo kaloo badan.
Deg deg ah, amaan ah oo sahlan in la isticmaalo dhowr guji oo keliya
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee Qalabka Soocelinta Xogta EaseUS waa in ay tahay software soo kabashada file xirfadle ah. Tani waxay tusinaysaa inay tahay a qalab aad u ammaan badan, dhakhso leh, dabcan, aad u fudud in la isticmaalo, sidaa darteed uma baahnid aqoon khaas ah oo aad ku soo kaban karto feylasha si khalad ah u lumay.
EaseUS ee Mac waxay bixiyaan a interface aad u macquul ah oo fududa taas oo u fududeyneysa isticmaale kasta oo Mac ah inuu helo oo soo cesho faylasha lumay si deg deg ah, badbaado leh oo fudud oo kaliya dhowr guji. Marka codsiga la bilaabo:
Xulo nooca faylasha aad u baahan tahay inaad ka soo kabato. Waxaad kala dooran kartaa dukumiintiyada, fiidiyowyada, sawirrada, maqalka, emaylka ama waxaad dooran kartaa "Dhammaan noocyada" haddii taasi ay tahay waxa aad u baahan tahay.
Hadda xulo goobta ay ku yaalliin feylashaasi lumay (xusuusnow inay noqon karto disk banaanka ah, kaarka SD, qalabkaaga adag ee Mac-ga ah ...) oo guji “Scan”. Sidoo kale, ha iloobin taas waxaad kala dooran kartaa a "Scan Degdeg ah" ama "Deep Scan". Oo hadda kaliya sug dhowr daqiiqo hawshu inay dhammaato.
Natiijooyinka ayaa lagaa tusi doonaa shaashadda. Xullo waxa aad raadineysay, ama shaandhee iyadoo loo eegayo mid kasta oo ka mid ah shuruudaha la heli karo (magaca, cabbirka, taariikhda abuurista, nooca feylka…) oo hadda waad soo kaban kartaa.
Qalabka Soocelinta Xogta EaseUS waxay u baahan tahay oo keliya 32 MB rakibaadda maxaa yeelay waa software aad u fudud oo ku habboon OS X 10.6 wixii ka dambeeya iyo xitaa waxay taageertaa macOS 10.14 (Mojave) Dhib malahan. Hadaad rabto waad heli kartaa nooc tijaabo ah oo bilaash ah barnaamijkan soo kabashada xogta u Mac ama naftaada u samee oo leh nooca buuxa ee boggeeda rasmiga ah.
Maxaa ku cusub nooca 11.8
Noocyada ugu waaweyn ee nooca ugu dambeeya ee softiweerku waa:
Taageerada macOS 10.14 (Mojave).
Kuu ogolaanayaa inaad si loo badbaadiyo dhammaan xogta soo kabsaday in daruurta si loo kordhiyo heerka amniga
Falanqeynta faylka PDF
Ku raadi faylka la cayimay magac kadib hawlgalka iskaanka
Kuu ogolaanayaa iskaan HFS iyo HFS + xijaab dhakhso
Soo kabashada horumarsan ee faylalka .flac, hagaajinta tayada marka loo eego noocyadii hore
Kuu ogolaanayaa inaad sifeeyo qarsoon iyo nidaamka files si toos ah.
Shaki la'aan waa qalab weyn oo noqon doona xalka ugu habboon dhammaan dhibaatooyinkeena marka ay timaado soo kabashada feylasha si kama 'ah loo tirtiro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Kabsado fayl kasta oo ka socda Mac-gaaga oo leh Wizard Data Recovery EaseUS
Runtii ma ogtahay waxaad ku shuban karto Mac-ga USB C?